SIDA LOO KARIYO HADHUUDHKA KU JIRA PANASONIC MULTICOOKER: WAXYAABAHA WAX LAGU KARIYO - KHUDRADDA
Corn ayaa ku jirta kaalinta saddexaad ee caanaha ka dib qamadiga iyo bariiska. Tani ma aha mid la yaab leh, sababtoo ah badeecada ayaa hodan ku ah qayb ka mid ah fiitamiinada iyo macdanta oo loo baahan yahay nolosha buuxda. Dadka waaweyn iyo carruurta adduunka oo idil waxay jecel yihiin raaxeysigan.
Ka sokow faa'iidooyinka weyn, hadhuudhku sidoo kale waa mid aad u dhadhan fiican. Si ay boqoradda this ee beeraha si ay u noqdaan saxan qoys qoyska, waxaa si ku filan si fiican loo kariyey. Hooyooyinka khibradda leh, ma qaadaan wax shaqo ama waqti badan.
Hase yeeshee, horumarku weli ma istaagayo, kalluunkeenuna wuxuu dejiyay mucjiso casri ah oo tiknoolaji ah - makiinadda qafiifka ah. Hadda hooyada casriga ah waxay karsan kartaa badeecada aad jeceshahay dheriga muusikada, iyada oo la ilaalinayo walxaha waxtarka leh!
Xagee ayaad ka timid?
Corn, sida laga soo xigtay saynisyahannadu, waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee dadku ku beeray. Alaabta dhuleed waxaa loo tixraacaa dhulalka casriga ah ee Mexico. Cuntada ayaa waxaa burburiyay qabaa'il aad u horumaray oo beeraley ah oo Hindiya ah. Later, oo ay weheliso Columbus, hadhuudhkii wuxuu yimid Europe.
Noocitaanka Maraykanku wuxuu ku guuleystey dadweynaha yurub, si adagna u galey cuntadii sharafnimada. Later, thanks to unpretentiousness ee beerashada, dhammaan fasalada kale waxay cuni karaan raaxada Mexican.
Waa maxay hadhuudhka waxtar leh?
Macdanta timirta ah - bakhaarka mareegaha caafimaadka leh iyo fitamiino. Qadar badan oo ka mid ah badeecada waxaa ku jira fitamiin K, PP, C, D iyo kooxda B. Waxyaabaha ay ka kooban tahay fiber, starch, potassium, magnesium, linoleic acid iyo walxo kale oo badan oo faa'iido leh ayaa sidoo kale la xusay.
Isticmaalka joogtada ah ayaa gacan ka geysan doona xalinta dhibaatooyinka soo socda:
si loo wanaajiyo shaqada mareenka mindhicirka;
xoojin murqaha waxayna bixiyaan nafaqo dheeraad ah oo ku saabsan unugyada;
pectins ku jira badeecadda ayaa ka caawin doonta ka hortagga sameynta burooyinka;
glutamic acid waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta xasuusta iyo shaqada maskaxda;
cunista miraha yar yar waxay ka caawinaysaa in ay ka takhalusaan jirka sunta iyo sunta;
sheyga wuxuu faa'iido u leeyahay daaweynta cagaarshow iyo cholecystitis;
Waxaa lagu talinayaa in la cuno hadhuudh loogu talagalay dadka qaba cudurka macaanka, xasaasiyadaha xasaasiyadda, iyo dadka qaba cudurada buurnaanta iyo beerka.
Fiiri fiidiyowga ku saabsan faa'iidooyinka hadhuudhka:
Si ay suxuunta ka soo baxaan hadhuudhka si ay u soo baxaan ma aha oo kaliya caafimaad leh, laakiin sidoo kale dhadhan fiican, waxaad u baahan tahay inaad doorato alaabta saxda ah. Kaliya wax yar oo tayada miraha dhalinyarada ah ayaa ka faa'iideysan kara iyo raaxaysiga dhabta ah ee dhabta ah. Si iibsigu u noqdo mid guul leh waa inaad raacdaa xeerarka fudud:
Hadheeyaal yar yar ayaa la iibiyaa oo keliya xilli. Wuxuu ka bilaabmaa bartamihii ilaa dhammaadka Agoosto.
Wixii karkaraya, waxaa ugu wanaagsan in la doorto midabyo leh cufan leh ama midab huruud ah.
Corn on the cob waa in ay noqdaan jilicsan iyo isla waqti isku mid ah taabashada.
Haddii aad si fudud u xoqdo hadhuudhka, waa in dareeraha khafiifka ah ee muuqaalku u muuqdaan, caano isku mid ah.
MUHIIM: Maaddada cagaarka cagaaran ee caleenta ah waxay muujinaysaa geerida hore. Sidoo kale in badeecadda alaabta la mariyo, marqaati furo caleemo jilicsan, oo naftooda ka danbeeya madaxa.
Fiiri fiidiyowga ku saabsan doorashooyinka hadhuudhka loogu talagalay karinta:
Cunto karinta hadhuudh la kariyey, waxaa jira dad badan. Nabadgelyo kasta oo guri-guri leh waxay leedahay qaabkeeda gaarka ah ee "calaamad" gaar ah oo lagu karsado sheygan. Laakiin ka hor intaadan bilaabin cunto karinta waxaad u baahan tahay inaad si haboon u diyaariso kaabajka daaweynta kulaylka.
Biyaha si fiican u raaci biyaha.
Ku qooji kareemka ilaa 1-1.5 saacadood biyaha heerkulka qolka.
Ka dooro cobs hal cabbir. Haddii kale, alaabtu waxay ku karsan kartaa si aan caadi ahayn.
Ka baxaa madaxyada lama saari karo. Waxaa jira cuntooyin badan oo ku lug leh karinta hadhuudhka leh caleenta.. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ka takhalusto caleemaha qallalan iyo qallalan.
Dad badan oo Panasonic ah ayaa lagu kala saaraa kalsoonida iyo shaqeynta sare. Milkiilayaasha badankoodu waxay leeyihiin liis liidashada barnaamijyada tooska ah. Laakiin, haddii aan ku soo qaadanno fikrado khayaali ah iyo internetka si ay u caawiyaan, dhibaatada waa la xallin doonaa. Barnaamijyada ay soo saarayaashu dhajiyeen ayaa ku filan diyaarinta cunto caafimaad leh, dhadhan fiican leh iyo kala duwan.
Mashiinkaan waxaad ku karsan kartaa dhammaan cuntooyinka dhaqameed ee jikada (eeg cuntooyinka diyaarinta suxuunta dhadhanka laga bilaabo hadhuudhka qaboojiyaha tartiib tartiib ah adigoo talaabo talaabo halkan ku jira). Sidoo kale maaha mid adag, oo isku kari khudaarta. Waa in la ogaadaa in dheriga dhoobada ah ay ka barato dhadhan fiican, habka wax lagu kariyo waxay qaadataa waqti aad u yar, walxaha waxtarka lehna waa la badbaadiyaa.
Si ay u karkaraan madaxyada hadhuudhka ee biyaha aan u baahanahay:
milixda jikada, haddii la rabo, waxaad bedeli kartaa badda;
shan faras oo hadhuudh ah;
litir biyo nadiif ah.
Ka hor inta aan la bilaabin diyaarinta madaxyada hadhuudhka waa in la nadiifiyaa caleemaha iyo timaha si fiicanna u dhaq. Ka dib markaa, waxaan ku dul jiifnaa caleemo cagaaran oo caleemo leh oo ku yaala dhinaca hoose ee luuqada xitaa daaha.
Kochanchiki nadiif ah oo la dhaqay on caleenta, ku dar subagga iyo ku shub hal litir oo biyo nadiif ah.
Ka dib, xir daboolka isku dhufashada iyo furaha gawaarida meel u xir meesha "xiran". Waxaan dejinay habka "cunto karinta" ama "maraq", isla markaana u daji 30 daqiiqo.
Ka dib markii uu calaamad u yahay in karinta la dhammeeyo, iska daa bamka iyo huuri hadhuudh diyaar ah oo ku yaal saxan caag ah. Ku dar milix iyo saliid inay dhadhamiyaan.
Sumeeyaha laysku qurxiyo ayaa aad u caawin kara. Ku dhowaad had iyo jeer, jikada tamarta ayaa lagu talinayaa dadka qaba cudurada mareenka caloosha iyo mindhicirrada, hooyooyinka kalkaaliyaha xanaanada iyo carruurta yaryar. Isku-dubarida hadhuudhka ah ee kuleyliyaha ah wuxuu badbaadiyaa dhammaan fiitamiinada iyo macdanta oo aad u faa'iideysanaya bani-aadamka.
Diyaarinta aan u baahannahay:
3-4 madaxyada hadhuudhka ee xaddiga 3-4 gogo ';
Panasonic multicooker leh weel dhoobo ah;
Biyaha saafiga ah oo saafi ah 1.5-2 litir.
Ka hor inta aadan bilaabin cunto karinta si taxaddar leh u dhaq dhaq iyo hadhuudhka laga bilaabo cagaarka iyo "timaha". Ku shub biyo ku rid digsi isku dhafan, ku rakib weel caag ah.
Madaxda jilicsan, si ay ugu haboonaadaan weelka. Xiritaan daboolka isku dhafka ah iyo dejinta "qalabka kuleylka". Samee waqtiga - 30 daqiiqo.
Ka dib markii barnaamijku dhammeeyey hadhuudhka ku yaal saxan guri, uumi milix iyo subag.
Hilib la kariyey - daaweyn loogu talo galay dadka waaweyn iyo carruurta. Sidee iyo intee in le'eg oo loo kariyo ee Multivarki Redmond iyo Polaris, iyo sidoo kale mashiinka cadaadiska - akhriya alaabtayada.
Sida loo adeego iyo waxa la cunayo?
Jacaylka mugdiga iyo dadka waaweyn iyo carruurta. Tani waa mid ka mid ah suxuunta ugu jecel dhamaadka bisha Agoosto. Sidee ayay noqon kartaa? Ka dib oo dhan, kaliya waqtigan sanadka waxaad ku raaxeysan kartaa waxyaabaha dhalinyarada ah iyo kuwa casiir leh.
TALO: Caado dhaqameedka dalkeena si ay u cunaan madaxyo hadhuudh la kariyey. U hubso inaad marto iyo subag.
Dabcan, daayeelka la kariyay oo dhan waa la qurxiyey, lakiin waa wax aad u haboon in la cuno qaybo yaryar. Hostess ayaa tijaabin kara oo karinaya hadhuudhka dabkaiyada oo la siinayo ketchup, toon ama sharoobada.
Isku day inaad qaniinto hadhuudhka ka soo baxa ceelka waa in ay ahaato sida in ay ku filan tahay afka. Tani waxay kaa caawin doontaa inaadan miiraan juiceeyo oo iska ilaali jahwareerka miiska. Madaxa gacanta, suufka warqadda ayaa loo isticmaali karaa. Haddii maraqa la siiyay saxanka, waxaa lagu faafaa lakab khafiif ah, oo leh qaaddo ku taala cob. Ha noqon mid hunguri leh iskuna day inaad markiiba qaadato maraqa badan. Waxa laga yaabaa inuu bilaabo inuu furo oo uu ka xishoodo martida.